IPhepha loLwazi lobuGcisa beNkcubeko kwiwadi yase-Ota "i-ART yinyosi ye-HIV" vol.10 + inyosi!
Iphepha loLwazi lweNkcubeko kwiWadi yeOta "i-ART bee HIVE" vol.10 + bee!
Umqolo. 10 Umba wasentwasahlobo
Umntu wobugcisa: Ifenitshala kunye nezixhobo USihlalo woMbutho weMbali yaNgaphakathi / iPropati eBhalisiweyo yeNkcubeko yeNkcubeko uKazuko Koizumi, uMlawuli we-Showa Living Museum + inyosi!
Shotengai x Art: Ivenkile yeencwadi zemifanekiso apho unokonwabela iti "TEAL GREEN kwiLali yeMbewu" + inyosi!
Ukuhoywa kwexesha elizayo ISINYATHELO + iinyosi!
Ifenitshala ayibonwa njengepropathi yenkcubeko okanye umsebenzi wobugcisa eJapan
"Izixhobo zefenitshala uSihlalo woMbutho weMbali yaNgaphakathi / iPropati eBhalisiweyo yeNkcubeko yeNkcubeko yaseShowa uMlawuli weMyuziyam ePhilayo, uKazuko Koizumi"
I-Showa Living Museum, egcina kwaye ivule izindlu zabantu abaqhelekileyo ezakhiwe ngo-26 kunye nempahla yasekhaya.Umlawuli, uKazuko Koizumi, ukwangumphandi wembali yoyilo lwangaphakathi lwefenitshala yaseJapan kunye nembali yobomi emele iJapan, ongusihlalo weFenitshala kunye neZixhobo zoMbutho weMbali yaNgaphakathi.Kwisiphithiphithi sexesha emva kwemfazwe, ukudibana nesifuba se-Sendai kwakhokelela kwindlela yophando lwefenitshala yaseJapan.
Kwimihla yakudala, ifenitshala ekhethekileyo yenziwa ngummandla ngamnye.
Ndivile ukuba uqalise inkampani yoyilo lwefenitshala emva kokufunda ukupeyinta kwaseNtshona kwiYunivesithi yaseJoshibi yoBugcisa noYilo.
"Kwakungowe-34. Yinkampani encinci enabantu abathathu kuphela, umongameli kunye nam, kwaye ndiyiyile. Ndenza ne-accounting kunye noyilo. Ngelo xesha, umgangatho wefenitshala wawuphantsi kakhulu. Iimpahla nakwi-tan, ifenitshala eneebhodi zeveneer kumacala omabini esakhelo somthi esibizwa ngokuba yi-flash structure yayithandwa kakhulu. Ekubeni yonke into yatshiswa emfazweni kwaye kungekho nto iseleyo, yonke into ihamba kakuhle kungakhathaliseki umgangatho. Ndandizibuza ukuba kukho into enokwenziwa.
Nceda usixelele malunga nokudibana kwakho nezifuba zeSendai kunye nefenitshala yaseJapan.
"Ngelo xesha, ndaya eJapan Folk Crafts Museum * eKomaba. Ndakhe ndaya kwiMyuziyam yeFolk Crafts ngamaxesha athile ndiseyintombazana. Wathetha nam ngokutya amaqhekeza erayisi. Xa ndisiya emsebenzini. kwifanitshala, umgcini wandixelela ukuba uSendai ubonakala esenza ifanitshala enomdla.
Ndiye ndaya eSendai.Ndafika eSendai kusasa ndaya kwisitrato apho iivenkile zefenitshala zazifolile, kodwa zonke iivenkile zazinezifuba zaseNtshona kuphela zesakhiwo sedrowa.Ndiphoxekile ukuba ibiyinto eyahlukileyo, ndithe xa ndijonga ngasemva, kukho umntu olungisa into endala.Ndamcela ukuba andixelele ukuba usenza isifuba se-Sendai sakudala, kwaye ndambuza ngokukhawuleza.Xa ndatyelela apho, ndamangaliswa kukufika kwentombazana eselula evela eTokyo, yaye umyeni wam omdala wandibalisela amabali amandulo awahlukahlukeneyo.Ndachukunyiswa bububele babantu abenza imisebenzi yemveli ezilalini, okanye ubuntu babantu abasebenza ngokunyanisekileyo. "
Kwasala amagcisa amaninzi.
"Indlu yayithumela ngaphandle isifuba se-Sendai ukususela kwixesha le-Meiji, ngoko kubonakala ngathi izifuba ze-Sendai zaziwa phesheya. Yayiyiyilo eyayithandwa ngabantu basemzini. Xa imikhosi yafika e-Sendai emva kwemfazwe. Nangona kunjalo, izifuba ze-Sendai zazifunwa, kwaye zafunwa, kwaye i-Sendai yayiyiyo. Ndaqhubeka ndizenza. Akunjalo kuphela kwi-Sendai, kodwa ngeentsuku zakudala, izifuba ezikhethekileyo zenziwa kwimimandla eyahlukeneyo, kodwa ngexesha le-Showa, zazilinganiswe kwisifuba saseTokyo. , Ngaphandle kwesifuba se-Sendai, siye sanyamalala.
Isifuba seSendai (embindini) esiye saba luyilo lwangaphakathi iOgiwara Miso Soy Sauce Shop kwisiXeko saseShiogama
Ngoncedo lweKazuko Koizumi Life History Institute
Akukho mntu wayefunda imbali yefenitshala.Bonke bayazifundisa.
Emva koko, ndaba ngumfundi wophando kwiSebe lezoBugcisa, iFaculty of Engineering, kwiYunivesithi yaseTokyo.Yayiyintoni isiqalo?
"Ndandifunda imbali yefenitshala ngelixa ndisebenza njengevenkile yefenitshala. Incwadi yokuqala endayipapashayo " Imbali yanamhlanje yezindlu "(Yuzankaku Publishing 34) eneminyaka eyi-1969. Abanye ootitshala malunga nezindlu ezibhaliweyo kwaye ndabhala malunga nefenitshala. Ukulawulwa nguNjingalwazi UHirotaro Ota wembali yezokwakha kwiYunivesithi yaseTokyo. Ndaba ngumfundi wophando lwembali yezokwakha.
Wenze uphando ngaphambi kokuba uye ekholejini, kwaye upapashe incwadi, akunjalo?
"Ewe. Kungenxa yoko ndiqalise uphando lwam ngokunyanisekileyo. Ekubeni uphando ngembali yefenitshala yayiyintsimi engaphuhliswanga, ndasebenzisa indlela yophando lwembali yezakhiwo kwaye ndaqhubeka nophando lwam ngokuphutha. Ndizifundisa. Xa ndiqala ukuphanda ngokwam, ndandingenamdla kwaphela kuyo emva komnye. "
Akukho mntu wayenomdla kwifanitshala.Ndandingalazi ixabiso lenkcubeko.
Ngaba ungathetha ngefenitshala njengobugcisa?
"Ifenitshala ineenkalo ezisebenzayo kunye nezobugcisa. Enye ifenitshala iyasebenza, ngelixa ezinye zilungile kwaye zixabiseke ngokwenkcubeko njengemisebenzi yobugcisa. Nangona kunjalo, ifenitshala yipropati yenkcubeko eJapan. Ixabiso aliqatshelwanga. Libizwa ngokuba yiRyukoin eDaitokuji * e- Kyoto.Intloko yenqabaTatchuKukho.Hermitage eyimfihloMitanYitempile egcina ubutyebi belizwe obuninzi obunje ngegumbi leti kunye nesitya seti yeTenmoku.Kwakukho idesika elula, entle, enobugcisa obuphezulu.UmsekiKogetsu SotoiUmhlazaYidesika yokubhala (1574-1643) esetyenzisiweyo.Lo mntu ngunyana kaTsuda Sōgyū, inkosi yeti kunye noSen no Rikyu kunye no-Imai Sokyu.Xa ndijonga edesikeni, ndafumanisa ukuba yidesika yemorus alba eyilwe nguRikyu.Yidesika enokuthi ibekwe njengepropathi yenkcubeko ebalulekileyo yesizwe.I-Ryukoin yitempile eyaziwayo enobuncwane obuninzi belizwe kwaye ihanjelwe ngabantu abavela kwi-Arhente yeMicimbi yeNkcubeko, kodwa ekubeni akukho mntu ubeka ingqalelo kwifenitshala, awaziwa okanye ahlolwe. "
I-Rikyu Morus alba desk ibuyiselwe nguKenji Suda, ubuncwane obuphilayo besizwe
Ndiyayixabisa njengento yomseki, kodwa andizange ndicinge ukuba ngumsebenzi wobugcisa okanye ipropathi yenkcubeko.
"Mininzi imizekelo enjalo. Eli libali xa ndaya eManshuin * eKyoto ukuze ndifumanise. Yitempile apho inkosana yesibini yeNkosana uHachijo Tomohito, inkosana yeKatsura Imperial Villa, yasungulwa ngexesha le-Edo. Uyilo lwamandulo lweSukiya-style Shoin-zukuri IShoin-zukuri libhotwe lenkosi, iSukiya-zukuri ligumbi leti, kwaye enye yenye yiKatsura Imperial Villa.
Kwakukho ishelufu enothuli kwikona yepaseji yeManshuin.Yishelufu encinci enomdla, ndiye ndaboleka iragi ndazosula.Ngokumalunga noyilo lwezakhiwo, yayiyishelufu eyakhiwe nguSukiya-zukuri Shoin.Kuze kube ngoko, ifenitshala ye-aristocrats yayiyisitayela se-Shoin-zukuri njengomsebenzi we-lacquer lacquer.Kwi-bran yesikhwama esiphezuluIbrocade ethambileyoZenkinBendinomphetho webrocade.IkwanguShoin-zukuri.Kwelinye icala, iishelufu zaziyi-sukiya-style kwaye zazinomphezulu womthi ongenanto.Yishelufu eyenziwe nguSukiya-style Shoin.Ngaphezu koko, yishelufu exabisekileyo enembali ende eyona nto yakuqala kwaye uyazi ukuba ngubani owayisebenzisayo.Kodwa akukho mntu wayeyazi loo nto.Njengoko kunjalo, ifenitshala ayibonwa njengepropati yenkcubeko okanye umsebenzi wobugcisa. Ndandidlana nodliwano-ndlebe "Ifanitshala yaseJapan yobuGcisa baseJapan" (Shogakukan 1977). "
Wonke umntu wayeyazi loo nto.
Ifanitshala yaseJapan inesitayile sakudala, isimbo seKaramono, isimbo sesukiya, isimbo sobugcisa besintu, kunye nomsebenzi wamagcisa ale mihla.Maki-eMakie·Urushi-eUrushie·RadenRadennjl.Ifenitshala esetyenziswa ngabantu abakwizikhundla eziphezulu ezifana nomlawuli kunye nezihandiba.Isitayile seKarmono sisebenzisa irosewood kunye ne-ebony ngoyilo lwaseTshayina.Isimbo seSukiya sisebenzisa amaxolo aphuhliswe ngomsitho wetiIndawo yokudibanisaIndawo yokudibanisaYifenitshala ye.Isimbo sobugcisa besintu sinoyilo olulula kunye nokugqiba okuphuhliswe phakathi kwabantu ukusuka kwixesha le-Edo ukuya kwixesha le-Meiji.Imisebenzi yamagcisa ale mihla yeyabazobi bezandla zomthi ukusukela kwixesha leMeiji.De kube ngoko, ifanitshala yayisenziwa ngamagcisa, yaye endaweni yokuba ngumbhali, waba ngumbhali kumaxesha anamhlanje.Ifenitshala iza ngamaxesha amaninzi ahlukeneyo kunye neentlobo kwaye inomdla kakhulu. "
Ngaba ifanitshala yaseJapan ayizange ifundwe ngokwembali de utitshala ayifunde?
"Ewe. Akukho mntu wayeyenza ngokunyanisekileyo. Ngoko ke, xa ndenza i-Yoshinogari Historical Park, kwakukho abantu kwimbali yokwakhiwa kwesakhiwo, kodwa akukho mntu wayesazi malunga nengaphakathi, ngoko ndabuyisela igumbi. Akukho mntu wenza njalo. ifenitshala eninzi kunye nembali yangaphakathi.
Enye inxalenye enkulu yomsebenzi wam kuphando kwifanitshala yanamhlanje yesitayela saseNtshona kunye nokubuyisela kunye nokubuyisela ngokusekelwe kuyo. "
Ifanitshala yashiywa ingalungiswanga.
Utitshala ukwasebenza kuhlaziyo lwefanitshala kwizakhiwo ezikwindlela yaseNtshona, ezithe zachongwa njengepropathi yenkcubeko ebalulekileyo kuzwelonke.
"UArisugawa TakehitoArisugawa no MiyatakehitoUkubuyiselwa kwefenitshala kwi-villa ye-Imperial Highness yakhe, i-Tenkyokaku, yeyokuqala.Bekungo 56 (Showa 1981).Ngokwemvelo, ifenitshala yakudala eyahlukeneyo isala kuyilo lwezakhiwo ezibalulekileyo zenkcubeko.Nangona kunjalo, i-Arhente yeMicimbi yezeNkcubeko ayichongi ifenitshala njengepropati yenkcubeko.Ngenxa yesi sizathu, ifenitshala ilahlwa xa isakhiwo silungiswa.Ngexesha lokubuyiselwa, irhuluneli yaseFukushima Prefecture yathi uTenkyokaku nguMnu. Matsudaira kwaye wayesihlobo sika-Arisugawanomiya.Ngoko kwakubonakala ngathi uTenkyokaku wayefana nendlu yezalamane zakhe, yaye ifanitshala yabuyiselwa yaza yabuyiselwa phantsi kolawulo oluthe ngqo lwerhuluneli.Ngayo yonke ifenitshala, igumbi liye laphila kwaye lihle.Ngenxa yoko, ifenitshala yeepropati ezibalulekileyo zenkcubeko kwilizwe lonke iye yabuyiselwa kwaye yalungiswa.Kummandla we-Ota Ward, ifenitshala ye-Asaka Palace yangaphambili, eye yaba yimyuziyam yegadi, ibuyiselwa.Ukusuka eYoshinogari ukuya kwindawo yokuhlala yaseAsaka Palace, ndimele ndiyenze. "
Ifanitshala yangaphambili yoBuyiselo lweBhotwe laseAsaka
Nceda usixelele ngemisebenzi yakho yexesha elizayo.
"Ndibhala imbali yefenitshala yaseKorea ngoku. Ndiceba ukuyibhala kungekudala. Kwaye ndinenye into endifuna ukuyibhala. Ndingathanda ukupapasha iincwadi ezimbini eziya kuba yincopho yophando lwam."
Uthini umxholo wenye incwadi?
Andikwazi ukuyithetha okwangoku (ehleka)."
* Imyuziyam yaseJapan Folk Crafts Museum: Yacwangciswa yingcaphephe uYanagi Soetsu kunye nabanye ngo-1926 njengesiseko sentshukumo yeMingei enenjongo yokwazisa imbono entsha yobuhle ebizwa ngokuba yi "Mingei" kunye "nokwenza ubuhle buphile". 1936 ngoncedo.Malunga ne-17000 yemisebenzi yezandla emitsha nendala evela eJapan nakwamanye amazwe, njengeeseramics, iimveliso ezidaywe kunye nezilukiweyo, iimveliso zokhuni ezilahliweyo, imizobo, iimveliso zentsimbi, iimveliso zemasonry, kunye neemveliso eziphothiweyo, eziqokelelwe ngamehlo amnandi kaYanagi zigcinwe.
* UMuneyoshi Yanagi: Ingcaphephe ephambili eJapan. Wazalwa ngo-1889 kwindawo ngoku ebizwa ngokuba yiMinato-ku, eTokyo.Enomdla ngobuhle be-ceramics yaseKorea, u-Yanagi wanikela imbeko kubantu baseKorea, ngelixa evula amehlo akhe kubuhle bezinto zemihla ngemihla zabantu ezenziwe ngabachwephesha abangaziwayo.Emva koko, ngelixa ephanda kwaye eqokelela imisebenzi yezandla evela kulo lonke elaseJapan, ngo-1925 waqamba igama elitsha elithi "Mingii" ukubhiyozela ubuhle bezobugcisa besintu, kwaye waqala intshukumo yeMingei ngokunyanisekileyo. Ngowe-1936, xa kwavulwa iMyuziyam yaseJapan Folk Crafts, waba ngumalathisi wokuqala. Ngo-1957, wonyulwa njengoMntu oMfaneleko kwezeNkcubeko. Wafa ngowe-1961 iminyaka engama-72.
* ITempile yaseDaitokuji: Yasekwa ngo-1315.Yatshatyalaliswa yiMfazwe yase-Onin, kodwa u-Ikkyu Sojun wachacha.UHideyoshi Toyotomi ubambe umngcwabo kaNobunaga Oda.
* ITatchu: Isikolo esincinane apho abafundi babelangazelela ukulunga baza balumisa ngasengcwabeni emva kokufa kombingeleli omkhulu waseOdera.Itempile encinci kumhlaba wetempile enkulu.
* IManshuin: Yakhiwa eHiei ngexesha leEnryaku (728-806) nguSaicho, umseki womfundisi wamaBhuda.Ngomnyaka we-2 we-Meireki (1656), iNkosana uHachijo Tomohito, umsunguli we-Katsura Imperial Villa, wangena etempileni waza wathunyelwa kwindawo yangoku.
* I-Tenkyokaku: Isakhiwo sohlobo lwaseNtshona olwakhiwe kufutshane neLake Inawashiro njengendawo yokuhlala ye-Imperial Highness Prince Arisugawa Takehito.Ingaphakathi lesakhiwo, elinoyilo lweRenaissance, lihambisa ivumba lexesha leMeiji.
Kazuko Koizumi kwi "Showa Living Museum"
Wazalelwa eTokyo ngo-1933.Ugqirha wezobuNjineli, uSihlalo woMbutho weMbali yaNgaphakathi yeFanitshala kunye neZixhobo, kunye noMlawuli weMyuziyam ephilayo yaseShowa, ipropati ebhalisiweyo yenkcubeko ebonakalayo.Imbali yoyilo lwefenitshala yaseJapan yangaphakathi kunye nomphandi wembali yobomi. Ubhale iincwadi ezininzi ezinje nge "Imbali yeNdawo yangaphakathi kunye neFanitshala" (Chuokoron-sha) kunye ne "TRADITIONAL JAPANESE FURNITURE" (Kodansha International).Owayesakuba ngunjingalwazi kwiYunivesithi yabaseTyhini yaseKyoto.
I-Showa Living Museum
Indawo / 2-26-19 Minamikugahara, Ota-ku, Tokyo
Ukufikelela / imizuzu eyi-8 ukuhamba ukusuka "kwiSikhululo saseKugahara" kumgca weTokyu Ikegami.Imizuzu eyi-8 ukuhamba ukusuka "kwiSikhululo saseShimomaruko" kumgca weTokyu Tamagawa
Iiyure zeshishini / 10: 00-17: 00
Iintsuku zokuvula / ngooLwezihlanu, ngeMigqibelo, ngeeCawe, nangeeholide
Ifowuni / 03-3750-1808
Ukuthenga isitrato x art + bee!
Ndifuna ukudibanisa ngononophelo abantu kunye neencwadi
Ivenkile yeencwadi zemifanekiso apho unokonwabela itiTEALTeal LUHLAZAluhlaza in Imbewuimbewu VillageIlali"U
Umthengisi: Yumiko Tanemura
Ukusuka kwisikhululo sikaMusashi Nitta, wela iKanpachi Dori kwaye ujike ngasekunene kwisango lesikolo sabantwana, kwaye uya kubona ivenkile enophawu lwamaplanga eludongeni olumhlophe.Yivenkile yeencwadi zemifanekiso "TEAL GREEN kwilali yeMbewu" apho unokonwabela iti.Ngasemva yivenkile yekofu, kwaye yindawo onokuthi uphumle kuyo nabantwana.
Ndifuna ukwenza uninzi lwendawo yevenkile yeencwadi kwindawo yokuhlala.
Yintoni eyakwenza ukuba uqalise?
"I-Kugahara Sakaekai kaKugahara (Minamikugahara) yayinendawo yokuqala eluhlaza okwesibhakabhaka. Yayintle kakhulu ivenkile yeencwadi zemifanekiso, ngoko ndandidla ngokuya khona njengomthengi. Kwakunjalo.
Xa ndeva ukuba le venkile iza kuvalwa ngoJanuwari 2005, ndakhumbula ngokwenene ukunyamalala kwevenkile entle kangako kwindawo yasekuhlaleni.Ndandizibuza ukuba ndithini ngobomi bam besibini emva kokuzinza kwam ukukhulisa umntwana, ndiye ndachitha unyaka ndilungisa ikhaya lam ndaza ndafudukela apha ngomhla wesithathu kuMatshi ka-1. "
Ndicela undixelele imvelaphi yegama levenkile.
"Igama linikwe ngumnini wangaphambili. I-Teal eluhlaza ithetha i-turquoise emnyama kwintloko yendoda ye-teal. Umnini wangaphambili wayengumyili. Phakathi kwemibala yendabuko yaseJapan. Kubonakala ukuba wakhetha eli gama.
Ilali ye-Iseed ivela kwigama lam, iTanemura.UTyr-Teal wabhabha eKugahara waya kuhlala eChidori.Kwaye ibali lelali yembewu = ukufika kwindlu kaTanemura lenziwe ngumnini venkile wangaphambili ngexesha lokuvulwa ngokutsha. "
Ngaba ungathetha ngeencwadi ojongene nazo?
"Sineencwadi zemifanekiso ezimalunga ne-5 kunye neencwadi zabantwana ezivela eJapan nakwamanye amazwe. Sinazo neeposikhadi kunye neeseti zeeleta zababhali. Ndifuna ukuba ubhale ileta. Emva koko, iileta ezibhalwe ngesandla zilungile. "
Nceda usixelele ingcamango kunye neempawu zevenkile.
"Ndifuna ukwenza uninzi lwendawo yevenkile yeencwadi kwindawo yokuhlala. Ndifuna abathengi bazive besondele kwihlabathi leencwadi ngokubamba isiganeko esimnandi esiyingqayizivele kule venkile."U
Ndicinga ukuba sinako ukuyiqonda intsingiselo yalo kuba ingumntu omdala onamava awahlukahlukeneyo obomi.
Yintoni umtsalane wehlabathi leencwadi?
“Xa ndandinexhala ukususela ebuntwaneni, ndivakalelwa kukuba ndiwoyisile amagama ale ncwadi. ukuze uzenze zonke, ngoko ke ndifuna ukuba usebenzise ukucinga kwakho kwincwadi ukuze ube nolwazi olungakumbi. Ndifuna uphile ubomi obucebileyo. "
Ngaba uyafuna ukuba abantu abadala kwakunye nabantwana bayifunde?
“Ndicinga ukuba abantu abadala abanamava obomi ahlukahlukeneyo banokuwuqonda nzulu ngakumbi undoqo wobomi. Kudla ngokuba yimeko yokuba abantu abadala baqonde izinto ababengaziqondi xa babengabantwana. cinga ukuba uya kuziva ihlabathi elisemva kwelo gama ngakumbi njengomntu omdala.
I-Teal Green ikwabambe iklabhu yeencwadi yoluntu ngokubanzi.Yintlanganiso apho abantu abadala bafunda ithala leencwadi lamakhwenkwe baze babelane ngezimvo zabo. “Xa ndiyifunda ndisengumntwana, ibingathi ngumntu owoyikayo nongazi ukuba uza kwenza ntoni lo mlinganiswa, kodwa xa ndiyifunda njengomntu omdala, ndiyabona ukuba sikho isizathu sokuba loo mntu enze loo nto.Indlela endandiziva ngayo yayahluke ngokupheleleyo kuleyo ndandisengumntwana. Ndandicinga ukuba xa ufunda incwadi enye izihlandlo ezininzi ebomini bakho, uya kubona into eyahlukileyo. "
Ndiyathemba ukuba abantu baya kufumanisa ukuba ihlabathi leencwadi zemifanekiso liyonwabile.
Abantwana banokuyiphucula intelekelelo yabo, kwaye abantu abadala banokuliqonda ngokunzulu ihlabathi ngenxa yokuba baye banamava obomi.
"Kunjalo. Ndifuna nje abantwana bayonwabele xa bengabantwana, ngaphandle kokucinga ngezinto ezinzima. Abantu abadala bafuna ukuba luncedo, kodwa yincwadi yemifanekiso. Ndiyathemba ukuba abantu baya kufumanisa ukuba ihlabathi limnandi."U
Zeziphi iindlela zokukhetha amagcisa kunye nemisebenzi oyenzayo?
"Yincwadi yemifanekiso, ngoko umfanekiso mhle. Kwaye ungumbhalo. Kwakhona kubalulekile ukuba kube lula ukufunda ngokuvakalayo. Ndihlala ndikhetha ibali elinesiphelo esinovelwano esinika ithemba. Abantwana bayalifunda. Ndiyathanda into eyenza Ndicinga ukuba "Oh, bekumnandi" okanye "Masenze konke okusemandleni ethu kwakhona". Ndifuna abantwana bafunde into eqaqambileyo kangangoko."U
Ndizama ukuba nethuba lokuva ibali ngqo kwigcisa.
Indawo yeCafe apho imizobo yoqobo yayibonisiwe
Ukongeza kwintengiso, uthatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukeneyo efana nemiboniso yokupeyinta yantlandlolo, iintetho zegalari, iiklabhu zeencwadi, imiboniso yeentetho, kunye neendibano zocweyo.
"Ngoku, kukho imiboniso emininzi yencwadi yemifanekiso yasekuqaleni. Ngelo xesha, ndinethuba lokuva amabali ngokuthe ngqo kumculi. Ziziphi iingcamango onazo xa usenza iincwadi, kwaye kuthatha ixesha elingakanani? Xa ndiva ibali lebali. yombhali, ndicinga ukuba ndizakufunda le ncwadi nzulu ngakumbi.Ndiyavuya kuba wonke umntu othathe inxaxheba uye wachukumiseka wabuya nobuso obukhazimlayo. , Itheko lokubalisa amabali leencwadi zemifanekiso liyafana, kwaye ndonwabile ukubamba loo mvakalelo yomanyano."U
Nceda usixelele izicwangciso zakho zexesha elizayo.
"Ngo-Epreli, siza kubamba umboniso wemizobo yantlandlolo ngumpapashi obizwa ngokuba ngu"Mekurumu. "Lo mpapashi waphehlelelwa ngumhleli yedwa ngo-4. Yimizobo yokuqala yeencwadi ezine ezipapashwe kulo nyaka uphelileyo. Ngumboniso. Lixesha elinzima kubapapashi bendicinga ukuba kungakuhle ukuba ndingabaxhasa."U
Inyaniso yokuba umhleli wayiqala yedwa mhlawumbi inemvakalelo enamandla kuye.
"Kunjalo. Ndiqinisekile ukuba kukho incwadi endandifuna ukuyipapasha. Ndicinga ukuba kukho incwadi endinokuyipapasha ukuba ayinakupapashwa ngumpapashi omkhulu. Kuyanika umdla ukwazi loo mvakalelo, akunjalo. Ekubeni iincwadi zenziwe ngabantu, zisoloko zineemvakalelo zabantu."U
Ndifuna ukuzisa iincwadi ezifunwa ngumntu.
Nceda usixelele malunga nophuhliso lwexesha elizayo.
"Ndingathanda ukwenza iinzame ezizinzileyo zokudibanisa iincwadi kunye nabantu. Abantu abeza kwivenkile yethu bafuna ukunika izipho kubantwana abanjalo, ngoko bazisa iingcamango zabo malunga nokuba luhlobo luni lweencwadi ezilungileyo. Nganye ndifuna ukuyidibanisa ngononophelo iincwadi. kunye nabantu ukuze ndikwazi ukuhlangabezana neminqweno yam."U
Ngokungafaniyo nomyalelo weposi, beza ngqo evenkileni.
“Ewe, abantu abaninzi bayabuza yaye banethemba lokuba incwadi enokufundwa ngamaxesha anjalo, njengencwadi enokukhululeka xa ulele ebusuku, okanye incwadi yemifanekiso ekwenza uhleke nomntwana wakho ngoxa nincokola. Ngoxa ndiyenza loo nto, ndiyakwazi ngandlela thile uzive ukuba ngubani kwaye injani imeko ngoku.ayiyoyabantu abadala kuphela kodwa neyabantwana.Yintoni onomdla kuyo kwaye wenza luphi uhlobo lokudlala?Ngelixa uphulaphule into enje,ndicebisa ukuba uzame olu hlobo Kwixesha elizayo xa usiza, ndivuya kakhulu xa ndisiva ukuba umntwana wakho wayeyonwabele kakhulu le ncwadi.Iziganeko zikwayindlela yokudibanisa iincwadi nabantu, kodwa ingcamango esisiseko kukuhambisa iincwadi kumntu ngamnye. Ndifuna ukuzisa iincwadi ezifunwa ngabantu."U
"TEAL GREEN kwiLali yeMbewu", ivenkile yeencwadi yemifanekiso apho unokonwabela iti
Indawo: 2-30-1 Chidori, Ota-ku, Tokyo
Ukufikelela / imizuzu emi-4 ukuhamba ukusuka "kwiSikhululo saseMusashi-Nitta" kumgca weTokyu Tamagawa
Iiyure zeshishini / 11: 00-18: 00
Iholide rhoqo / ngoMvulo / ngoLwesibini
I-imeyile / ityeli-luhlaza ★ kmf.biglobe.ne.jp (★ → @)
Ingqwalaselo yexa elizayo IKHALENDA YESIGANEKU-Matshi-Epreli 2022
Umshicileli "Mekurumu" uMboniso
"Ndifuna ukuhambisa iincwadi kubo bonke abantwana"
Matshi 3th (ngoLwesithathu) -Aprili 30 (ngeCawa)
Iholide rhoqo: NgoMvulo nangoLwesibini
NgoAprili 4 (ngoMgqibelo) 9: 14-00: 15
NgoAprili 4 (ngoMgqibelo) 16: 14-00: 15
IModyuli kaloliwe IBANDLA IBANGA2022
Agasti 4 (Sat) kunye ne-2 (Ilanga)
10:00-17:00 (16:00 ngosuku lokugqibela)
UVeliso loBuchule beCre Lab Tamagawa
Mahala/akukho bhukisho olufunekayo
UMboniso wesi-3 wamaGcisa aseKhaya: uMboniso wamaGcisa aManina eKamata
Ngomhla we-4 kuEpreli (ngeCawa)-ngoMeyi 10 (ngelanga)
Iholide rhoqo: NgoLwesithathu nangoLwesine
Igalari Minami Seisakusho
Epreli 4 (Ilanga) 17: 14-
Mahala / ugcino luyafuneka
Umdlali: Takuya Kimura (umgcini weRyuko Memorial Hall)
Epreli 4 (Ilanga) 25: 15-
2,500 yen, inkqubo yogcino
Abalingisi: Torus (Hal-Oh Togashi Pf, Tomoko Yoshino Vib, Ryosuke Hino Cb)
Igalari iKishio Suga kunye noBuddha Heian
Kishio Suga << Climate of Linkage >> (inxalenye) 2008-09 (ekhohlo) kunye << Wood Carving Kannon Bodhisattva Remnants >> Heian Period (12th Century) (Ekunene)
Nge-6 kaJuni (ngoLwesihlanu) -3 (ngeCawa)
Iholide rhoqo: ngoMvulo-Lwesine
Igalari yakudala neyangoku
I-Ota Art Archives (OAA) 3 Takashi Nakajima
Umboniso odlulileyo weTakashi Nakajima
KwiKamata Co., Ltd.
ulwazi ★ atkamata.jp (★ → ＠)
Iphepha loLwazi lweNkcubeko kwiWadi yeOta "i-ART bee HIVE" vol.9 + bee!
Iphepha loLwazi lweNkcubeko kwiWadi yeOta "i-ART bee HIVE" vol.8 + bee!